वात दोष र आयुर्वेद – Sky News Nepal
वात दोष र आयुर्वेद
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार १७:३७ मा प्रकाशित
वात दोषको सिद्धान्त आकाश र वायुमा आधारित हुन्छ । यी दुवै घटनाहरूमा आकाश पहिलो तत्व हो, जुन धेरै सूक्ष्म हुन्छ । यसलाई आकाश वा अन्तरिक्ष पनि भनिन्छ । वायु आकाशपछिको दोस्रो प्रमुख तत्व हो । यो वायु आकाशबाट विकसित हुन्छ । वात यी दुई तत्वहरूको संयोजन हो । यद्यपि वात पनि सूक्ष्म हुन्छ, त्यसैले यसको उपस्थिति शरीरमा यसको कार्यद्वारा मात्र महसुस गर्न सकिन्छ ।
वात दोषको गुण के हो ?
वात दोषको बारेमा आयुर्वेदमा प्रभावकारी रूपले व्याख्या गरिएको छ । जसअनुसार वात दोषमा प्रयोग गरिने प्रमुख शब्दहरू निम्नानुसार छन् ।
–कठिनाइ आदि ।
यद्यपि वातलाई शीतको रुपमा पनि मान्ने गरिन्छ । तर यो वातले योगावहीको रूपमा कार्य गर्ने गर्छ । यसको अर्थ यो हो कि जब यो तातो पदार्थसँग मिल्यो भने यसले तातो गुण नै देखाउँछ र चिसो पदार्थसँग मिल्यो भने चिसो गुणको नै विकास हुन्छ । यद्यपि वातले आफ्नो आन्तरिक गुण कहिल्यै गुमाउँदैन । तर यसले योसँग सम्बन्धित अन्य पदार्थहरूको गुणलाई भने असर गर्न सक्छ ।
पित्तसँग मिसाउँदा यसले न्यानोपनाको उत्पादन गर्छ । जब यसलाई कपमा जडान गरिन्छ, यसले शीतलता प्रदान गर्ने गर्छ ।
सामान्य शब्दमा, बात तन्त्रिका प्रणालीको सबै प्रमुख कार्यको लागि जिम्मेवार हुन्छ ।
वातका प्रमुख कार्यहरू निम्नानुसार छन् ।
वात जीवित कोशिकाहरूसँगको सञ्चार र परिवहन क्रियालाई नियन्त्रण गर्ने स्वभावको हुन्छ । यसले सेलुलर संरचनामा अणुहरूको आवागमनलाई निर्धारण गर्छ । जसमा शरीरको गतिशीलता पनि नियन्त्रण गर्दछ । मस्तिष्कबाट शरीरको अन्य अंगहरूको सञ्चालनका लागि पनि वातले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो शरीरमा सेलुलर विभाजन वातबिना सम्भव नै छैन । त्यसकारण वात शरीरका लागि एउटा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ ।
शरीरमा वातका विभिन्न कार्यहरू
–वातको भ्रुणको आकार बनाउने र निर्धारित गर्नमा मुख्य भूमिका हुन्छ । वातले भ्रुणको आकार गठन र निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
–यसले शरीरमा सुख्खापन पैदा गर्छ ।
–वातले शारीरिक गतिविधि र चाललाई प्रेरित गर्छ ।
–वातले शारीरिक क्रियाकलापको गति निर्धारण गरेर पित्त नियन्त्रणमा समेत भूमिका खेल्छ ।
–वात एक प्रमुख घटक हो जुन भ्रुण विकासदेखि जीवनको विनाशसम्मका सबै गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । मस्तिष्क, स्पाइनल कोर्ड र परिधीय स्नायुसहित स्नायु प्रणालीका सबै कार्य वातका कारण हुने गर्छन् । यसले स्नायु प्रणालीको आवेगहरूको उत्तेजनामा भूमिका खेल्छ ।
शरीरमा वातको स्थान कहाँ छ ?
यो निर्धारण गर्न गाह्रो छ कि वात शरीरको कुन् मुख्य हिस्सामा रहन्छ ? किनकि वात सम्पूर्ण शरीर र जीवित कोशिकाहरूमा हुन्छ । तर पनि आयुर्वेदले शरीरका केही प्रमुख अंग तोकिदिएको छ, जहाँ वातको कार्य हुने गर्छ । आयुर्वेदका अनुसार नाइटोको मुनि सबै अंगलाई यसको क्षेत्र मान्ने गरिएको छ । यसबाहेक यसको मुख्य स्थान निम्नानुसार छ :
छाला आदि ।
वात कति प्रकारको हुन्छ ?
सामान्यतया वात ५ प्रकारका हुन्छन् ।
१ प्राण वायु
२ उदान वायु
३ समान वायु
५ अपान वायु
प्राण वायु के हो ?
योगमा प्राण वायु जीवन शक्ति र महत्वपूर्ण उर्जाको प्रतिनिधि मान्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा, यो दिमाग, बुद्धि, विवेक, स्नायु तन्त्रिका, इन्द्रिय, आदि मूल कार्यात्मक इकाई हो ।
शरीरमा प्राण वायुको स्थिति –
प्राण वायु शरीरको विशिष्ट भागमा अवस्थित हुन्छ । जस्तैः
मुटु र फोक्सोमा
नाक आदि । यद्यपि प्राण वायुको उपस्थिति वा स्थानका बारे धेरै व्यक्तिको फरक दृष्टिकोण छ । तर यो सेलुलर स्तरदेखि शरीर भर काम गर्ने स्वभावको हुन्छ । यसको अवलोकन योग्य कार्यहरू टाउको र नाइटोको बीचमा देख्न सकिन्छ । यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार प्राण वायुको तीन मुख्य स्थानहरू छन् ।
प्राण वायुको साझा कार्यहरू के–के हुन् ?
प्राण वायुका साझा कार्यहरू निम्न अनुसार छन् :
–खाना निल्नको लागि सजिलो बनाउनु
–पाँच इन्द्रियलाई परिचालित गर्नु
–नसाको कार्य ।
प्राण वायु बढ्दा निम्तिन सक्ने समस्याहरू
वातको कमीले निम्तिन सक्ने समस्याहरू
जब एक व्यक्तिले निम्न लक्षणहरू महसुस गर्छ भने यस्तो अवस्थाले शरीरमा वातको कमीलाई संकेत गर्छ ।
–चिल्लो अमिलो र पीरो खाने कुराको लागि इच्छा ।
–धेरै सुक्खा खानाले कुरालाई प्राथमिकता दिनु ।
–संवेदना कम हुनु
–असन्तुष्टि बढी हुनु
–थकानको महसुस हुनु
–सुस्त चाल हुनु
–सुस्त बोली वा बोल्नमा नै थकाइ लाग्नु
–कमजोर पाचन शक्ति
कुनै पनि व्यक्तिको निम्न लक्षणहरूले पनि बढेको वातलाई संकेत गर्छ ।
–तातो र मीठो खाना खाने इच्छा
–शरीरको वजन स्वतः घट्नु
–छाला कालो वा गाढा हुनु
–शक्तिको अभाव हुनु आदि । (अनलाइन खबर)
विकास र समृद्धिका लागि एमाले : नेता कँडेल